I-HASERA Organic Farm & Farmstay - I-Airbnb
I-HASERA Organic Farm & Farmstay
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguBigyan
IHASERA yifama ephilayo kunye nefama. Sibatsha ku-Airbnb, kodwa sineminyaka eli-12+ sinondwendwelo!
Sibonelela ngokutya kwemvelo yasekhaya, umbono omangalisayo wee-Himalayas, nokunye okuninzi! Ngexesha lokuhlala kwakho uya kuhlala nathi kwifama yethu, apho siya kusebenza khona, sifunde, kwaye sitye kunye, njengamava efama/osapho. Sele sibamkele abantu abavela kumazwe angaphezu kwe-100 ehlabathi!
Nceda uye kwiwebhusayithi yethu (organicHasera.org) ukufunda ngakumbi ngathi kunye nenkqubo yethu yeFama.
I-HASERA yiFama ye-Organic eqinisekisiweyo, iFama yokuhlala kunye neZiko lokuFunda lePermaculture.
Sibamba abafundi kunye nabahambi abazimisele ukufunda ngendlela yokuphila yaseNepali, ezolimo eziphilayo, kunye nePermaculture.
Sinikezela ngendawo yokuhlala enoxolo, indawo enkulu yokuhlala kude nesixeko, kunye nethuba lokufunda ngePermaculture, ulimo oluphilayo, inkcubeko yaseNepali, indlela yokuphila kunye ne-ecology ngokuntywiliselwa. Uluhlu olubanzi lwe-himalayan lukwabonakala ngokusondeleyo ukusuka efama.
Sikwaqhuba iikhosi ezimfutshane nezineenkcukacha zePermaculture kubathathi-nxaxheba baseNepali nabamazwe ngamazwe.
Ngaphezulu kwe-90% yokutya okunikezelwayo efama kungokwemvelo kwaye kuvela kwifama ngokwayo.
Ifama ihleli yodwa phezu kwehlathi loluntu, umzuzu nje ukusuka kuhola wendlela iBP.
I-Monastery yaseNamobuddha kukuhamba nje iyure, kwaye kukho ukuhamba okumnandi ukujikeleza uluntu olukufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Bigyan
Sisoloko sikhona ukuze sincokole, kwaye sincede iindwendwe zethu ngayo nayiphi na imibuzo ezinayo. Ngenxa yokuba iHASERA liziko lokufunda lePermaculture, siyakuvuyela ukufumana imibuzo yokunceda iindwendwe kangangoko sinako.